10-18-2016, 09:15 AM (09-04-2016, 11:31 AM)@boy_stealthy Wrote: Yangon ga bar. Girlfriend nae date nay dar3months lout shi b. Thu ka very shy phyit tal. Myanmar San San lay bar. Thu hmote pay dar khan chin dal. How do I ask her to give meablowjob? Bal lo may ya Ma lal? Sate soe pe htar kae mar so loz par. Thank you kwee doz.
Sex ကိစ္စက အလွန်အကျွန်စိတ်ထဲထားတာမျိုးမလုပ်ပဲ စိတ်ကိုလျော့ထားပါ. ကိုယ်ချစ်တာ ဂရုစိုက်တာသိရင် အနည်းနဲ့အများလိုက်လျောပေးကြပါတယ်. မိန်းကလေးတွေအတွက်ကတော့ စိတ်လုံခြုံမှုက နံပါတ်တစ်ပါ. ဘယ်လိုအခြေနေမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ် သူ့အတွက့်လြုံတယ့်ခံနေအောင်လုပ်ပေးပါ. အတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ ရုပ်ရှင်ရုံလိုနေရာမျိုးက စသင့်ပါတယ် . Super log မှာ နေပြည်တော်တို့ ရှေ့ဆောင်တို့က အဆင်ပြေကြပါတယ် . အေးဆေး အထိုင်ကျပီဆိုမှ ဖတ်ထားပီး ချစ်တယ်ပြောလိုက် . ပါးလေးနမ်းလိုက်လုပ်သင့်ပါတယ် . ပီးမှာ နှုတ်ခမ်းခြင်းနမ်းပါ . နမ်းနေရင့်းမှ ရင်သားကို အကျီပေါ်ကနေပွတ်ပါ. ချိတ်ဖြုတ်ဖို့တော့လွယ်လွယ်မစဉ်းစားပါ့နဲ့. သူဘက်က ပါလာမှ ဆက်တက်ပါ. မှတ်ချက် . အဲ့လိုပေးလုပ်တာမျိုးကို ကျေးဇူးပဲတို့ နောက်တစ်ခါကြရင်တခြားဟာပေးရမယ်ဆိုတာတွေမပြောမိအောင်ဂရုစိုက်ပါ. ဝုန်းဒိုင်းမလုပ်ပါနဲ့.